Diyo post :: * ‘फेक रेस्क्यु प्रकरण : यी हुन् छानबिन समितिले गोप्य राखेको तर कारबाहीमा परेको कम्पनि ! * ‘फेक रेस्क्यु प्रकरण : यी हुन् छानबिन समितिले गोप्य राखेको तर कारबाहीमा परेको कम्पनि ! - Diyo post
काठमाडौं । पदयात्री पर्यटकलाई विरामी बनाएर चर्को अशुली गरेको अभियोगमा कारबाही गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरिय कार्यदलले पदयात्री पर्यटकलाई विरामी बनाउँदै पर्यटकबाट चर्को रकम ठगी गरेको ठहर गर्दै विभिन्न पर्यटन सम्बद्ध कम्पनिहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
दियोपोस्टलाई उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तीन वटा हेलिकोप्टर कम्पनि, तीन अस्पताल र चार रेस्क्यु तथा एक ट्रेकिङ कम्पनिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले दुई हप्ता अघि नै रेस्क्यु कम्पनिहरु, इजी हेलि सर्भिस्, माउन्टेन रेस्क्यु, ईगल हेलि सर्भिस, कैलाश चार्टड, माउन्टेन हेलि र अल्पार्इन रेस्क्यु सर्भिसलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै समिति स्रोतका अनुसार फ्लाइट कनेक्सन, हिमालयन सोसियल जर्नी लगायत कम्पनिलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
यता तीन वटा हेलिकोप्टर कम्पनि पनि कारबाहीको दायरमा परेका छन् । एअर डाइनेस्टी, एभरेष्ट हेलिकोप्टर र *मनाङ एअर*लाई पनि कारबाही गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ ।
पर्यटकलाई विरामी बनाएर चर्को शुल्क अशुलेको अभियोगमा चार वटा अस्पताल पनि कारबाहीको दायरमा परेका छन् ।
राजधानीको ठमेल क्षेत्रमा रहेको इरा हेल्थ सेन्टर लैनचौर स्थित रहेको सिवेक क्लिनिक, बयाेधा अस्पताल र स्वाकन अस्पताललाई कारबाही गर्नका लागि छानबीन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
छानबीन समितिले ठगी गरेको प्रमाण सहित गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई भेटेरै प्रतिबेदन बुझाएका थिए । गृहमन्त्री थापाले उक्त विषयमा छानबीन गर्नका लागि गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीलाई छानबीन निर्देशन दिएका थिए लगत्तै सुवेदीले प्रहरी अधिकारीसँग उक्त विषयमा छलफल चलाएका थिए ।
विरामी ठगी गर्ने अस्पताललाई भने कारबाही गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । उनीहरुलाई ठगी अन्तर्गत कारबाही गर्नका लागि मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।
तीन हेलिकोप्टर कम्पनिलाई भने नागरिक उडयन प्राधिकरणलाई कारबाही गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
त्यस्तै पदयात्री पर्यटकलाई विरामी बनाएर चर्को शुल्क लिने अधिकांश कम्पनिहरुबाट राजश्व चुहावट भएको भन्दै राजश्व अशुल गर्नका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरिएको छ ।
‘हामीले केही दिन अघि कार्यविधि बनाएर नै कारबाही गर्नका लागि समेत समिति बनएका छौँ,’ छानबीन समितिको उच्च स्रोतले भन्यो,‘जहाँ जहाँ पत्र गएको छ त्यहाँबाट कारबाहीको फलोअप हुनेछ ।’
प्रहरी कार्यालयमा पनि पत्र !
ठगी गर्ने कम्पनिलाई कारबाही गर्नका लागि समितिले महानगरिय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा समेत पत्राचार गरेको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्त डिआइज मनोज न्यौपानेको टेबुलमा दुई हप्ता अघि नै कारबाही गर्ने कम्पनिहरुको नामावली पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
विरामी पर्यटक ठगी गर्ने ‘पाँच तारे क्लिनिक’ : हिउँले हात खुट्टा खाएको विरामीको बील ८ लाख !
फेक रेस्क्यु धन्दा : अब प्रहरीले रेस्क्यु गर्ने, ८ ट्रेकिङ, रेस्क्यु ट्राभल कम्पनिमाथि कारबाही हुने !
‘फेक रेस्क्यु धन्दा’ : छानबीन समितिले पर्यटन मन्त्रीलाई बुझायो ७ सय पृष्ठको प्रतिबेदन !
‘फेक रेस्क्युधन्दा’ : फेरी २२ कम्पनि छानबीनमा तानिए, टानका अध्यक्ष र पूर्वमहासचिवले बुझाए विवरण !
विदेशी पर्यटकमाथि एअरलाईन्सको ठगीधन्दा : चारगुणा बढी शुल्क असुली, छुट्टै भाडादर (प्रमाणसहित) !
पर्यटक उद्दारको नाममा ‘ठगी’ गर्ने ‘ट्रेकिङ’ कम्पनिद्वारा ३ दिन भित्र विवरण बुझाउन इन्कार ! (सूचीसहित)
सापकोटाको ‘कालोधन्दा’ विदेशी पत्रिकामा छताछूल्ल : विरामी पर्यटकलाई हेलिकोप्टरको ३५ हजार डलर !
पर्यटक विरामी बनाएर हेलि उद्दारको नाममा यसरी हुन्छ ‘ठगीधन्दा’ एक विदेशीको दर्दनाक बयान !
पर्यटकलाई विरामी बनाएर ‘चर्को शुल्क उठाउने धन्दा’ : २० ट्रेकिङ कम्पनिमाथि कारबाही हुने !
दियोपोस्टलाई धम्की दिने विरुद्ध पत्रकार महासंघ बोल्यो,‘धम्की पत्रकारितामाथिको आक्रमण हो’